Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံထုတ် မီးရထားသံလမ်းများ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ စီမံကိန်းနေရာသို့ ရောက်ရှိ
တရုတ်	အင်ဒိုနီးရှား	မြန်နှုန်းမြင့်ရထား
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဂျာဗားပြည်နယ် ဘန်ဒေါင်းမြို့ Tegal Luar Electric Multiple Units (EMU) မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း (HSR) အတွက် မီတာ ၅၀ ရှည်သော ရထားသံလမ်း ပထမအသုတ် ရောက်ရှိလာစဉ် (ဆင်ဟွာ) Asia
အဆိုပါ မီးရထားသံလမ်းများသည် အလယ်ဂျာဗားပြည်နယ် Cilacap ဆိပ်ကမ်းမြို့မှ ဧပြီ ၆ ရက်က ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး အနောက်ဂျာဗားပြည်နယ် မြို့တော် ဘန်ဒေါင်း အပြင်ဘက်ရှိ Tegal Luar Electric Multiple Units (EMU) ကုန်လှောင်ရုံသို့ ဧပြီ ၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ရောက်ရှိလာပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ရထားလမ်းလိုင်းတစ်လျှောက် ဖြတ်သန်းသယ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဂျာဗားပြည်နယ် ဘန်ဒေါင်းမြို့ Tegal Luar Electric Multiple Units (EMU) မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း (HSR) အတွက် မီတာ ၅၀ ရှည်သော ရထားသံလမ်း ပထမအသုတ် ရောက်ရှိလာစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကီလိုမီတာ ၁၄၂.၃ ရှည်လျားသော HSR ကို လည်ပတ်သော တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပိုင် လုပ်ငန်းများကြား ပူးတွဲလုပ်ငန်းစုဖြစ်သော KCIC မှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ၎င်းကုန်တင်ပို့မှုသည် ရထားလမ်းဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် နေရာချခြင်း နောက်တစ်ဆင့်အတွက် အခြေအနေများဖန်တီးပေးလိုက်သလို စီမံကိန်း တည်ဆောက်မှု အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် အခိုင်အမာပံ့ပိုးပေးခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်း KCIC က ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း Panzhihua မြို့တွင် ထုတ်လုပ်ထားသော ရထားသံလမ်း ပထမအသုတ်ကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလက တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီးကျွမ့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ Fangchenggang ဆိပ်ကမ်းမြို့မှ ပင်လယ်အားဖြတ်လျက် Cilacap မြို့သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KCIC က ဆိုသည်။
တစ်နာရီလျှင် ၃၅၀ ကီလိုမီတာ အမြန်နှုန်းဖြင့် ပြေးဆွဲနိုင်သော မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းသည် ဂျကာတာနှင့် အနောက်ဂျာဗားပြည်နယ် မြို့တော် ဘန်ဒေါင်းအကြား ခရီးသွားလာသည့်အကွာအဝေးကို သုံးနာရီကျော်မှ မိနစ် ၄၀ ခန့်အထိ လျှော့ချပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
1-4 - Photo taken on April 7, 2021 shows the first batch of 50-meter rails for the Jakarta-Bandung High Speed Railway (HSR) delivered to the track-laying base of the Tegal Luar Electric Multiple Units (EMU), in the suburb of Bandung, West Java of Indonesia. The first batch of 50-meter rails of the Jakarta-Bandung High-Speed Railway (HSR) was transported to the track-laying base on Wednesday, the railway's operator said. (Xinhua/Zulkarnain)
5-7 - Photo taken on April 7, 2021 showsascene of the reception ceremony for the first batch of 50-meter rails for the Jakarta-Bandung High Speed Railway (HSR) delivered to the track-laying base of the Tegal Luar Electric Multiple Units (EMU), in the suburb of Bandung, West Java of Indonesia. The first batch of 50-meter rails of the Jakarta-Bandung High-Speed Railway (HSR) was transported to the track-laying base on Wednesday, the railway's operator said. (Xinhua/Zulkarnain)
Previous Article အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ဆိုးရွားသည့် သဘာဝဘေးကျရောက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၆၅ ဦးအထိ ရောက်ရှိလာ
Next Article အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ်တွင် အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၃၈ ဦးထိမြင့်တက်